प्रेरणाका स्राेत मदन (भिडियाेसहित) – Puleso
प्रेरणाका स्राेत मदन (भिडियाेसहित)
By:puleso Published Date: बुधबार, फाल्गुन ३०, २०७४
अपांगता भएका व्यक्ती भन्ने बित्तिकै तपार्इको दिमागले कस्ताे कस्तो व्यक्तीहरु काे कल्पना गर्न सक्छ ? अझै, त्यसमा मैले दुर्इवटै हात नभएकाे व्यक्ती र साथै त्यही फरक क्षमता भएकाे व्यक्तीले अाफ्नाे दैनिकी अाफ्नाे खुट्टाकाे मद्दतले चलाइरहेका छन् .भन्दा सामान्य लागे पनि, उनले एउटा लुगा सिलाइकाे पलस पनि संचालन गरिरहेका छन् भन्दा के तपार्इं पत्याउनुहुन्छ?
हाे उनी झट्ट हेर्दा हेर्दा अपांग देखिन्छन् र उनका दुवै बाहिरि हात छैनन् । तर पनि उनले अाफ्ना सबै काम अाफ्ना दुर्इ खुट्टाले गर्छन् । पत्यार नलाग्न सक्छ उनी अाफ्ना दुर्इ खुट्टाले लुगा सिलाउने गर्छन् । उनले यसलार्इ पेशा बनाएर अाफ्नाे परिवार चलाएका छन् । भारतकाे एक गरीब परिवारमा जन्मिएका उनकाे नाम मदन हाे । मदनले अाफ्नाे दैनिकी साङ्ग व्यक्तिले झै बिताइरहेका छन् । नुहाउने, खाना खाने लगायत सम्पूर्ण कार्य उनले अफ्नै खुट्टाकाे मद्दतले गर्दै अाएरहेका छन् । उनी हरेक व्यक्तीका लागि एक प्रेरणा र उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।
यदि मनबाटै केही गर्ने इच्छा र अात्मबिश्वास जुटाउन सके मान्छेले गर्न नसक्ने केही छैन् मदनले याे प्रमाणित गरेका छन् । उनकाे जीवनबाट हरकसैले केही न केही प्रेरणा र ज्ञान लिन सक्छ । मदन अफूलार्इ बिश्वास गर्ने र सहयाेग गर्ने हातहरूकाे प्रखार्इमा छन् । मदनकाे याे भिडियाे अहिले सामाजिक संजालमा संसारभर भाइरल भइरहेकाे छ।
हेर्नुहाेस् याे प्रेरणादायक भडियाेः
पेटलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि केहि प्राकृतिक तरिका
भनिन्छ, विश्वमा खान नपाएर होइन, खान नजानेर धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । खान नजानेरै हो, रोगी भएको पनि । के विस्तृतमा...
लोकसेवा पास गरेर आउने मेडिकल अधिकृत दुर्गममा पोस्टिङ माग्न थालेपछि (नामावली सहित)
पछिल्लो समय चिकित्सकहरू धमाधम दुर्गमतिर केन्द्रित भएका छन् । दुर्गममा गएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन चिकित्सक मान्दैनन् भन्ने समाचार धेरै आए । विस्तृतमा...